Bubble Witch3Saga 5.7.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.7.3 လြန္ခဲ့ေသာ3မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Bubble Witch3Saga
Bubble Witch3Saga ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပူဖောင်းစုန်းမ3Saga - Candy Crush Saga ၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ပဟေဠိဂိမ်းရိုက်ကူးတစ်ဦးကမှော်ပူဖောင်း။
နာမည်ကျော်ပူဖောင်းစုန်းစီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်း။ Stella ဟာစုန်းမပြန်ဖြစ်ပြီးသူမသည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပဟေဠိ blasting စွန့်စားမှုအတွက် Wilbur အနိုင်ယူရန်သင့်အကူအညီနဲ့လိုအပ်ပါတယ်! Wilbur ချစ်စရာကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကမှော်မကောင်းသောအကြံကိုအပြည့်အဝပဲ! ဒီပူဖောင်းပစ်ခတ်မှုပဟေဠိဂိမ်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့အများအပြားပူဖောင်းသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်စိမ်းဖြင့်ဘုံခရီးသွားခြင်း။
Stella, နီရိုနှင့်ဗိုင်သင်နှင့် Stella ဗုံးနှင့်မှော်တိနှင့်အတူ pop ရန်ခွင့်ပြုသည်သောထူးခြားတဲ့ရည်မှန်းလိုင်းနှင့်အတူပူဖောင်းကိုက်ညီခြင်းအားဖြင့်ဘုံမှအပိုင်းအစ restore ကူညီပါ! , ထိုသရဲတစ္ဆေပြန်လည်ပူးပေါင်းသည့်မြည်ကယ်တင်နှင့်ဤပေါက်ကွဲပူဖောင်းပစ်ခတ်မှုစွန့်စားမှုအတွက်အရေးကြီးသောနတ်သမီးပုံပြင်မိဖုရားကယ်ဆယ်ဖို့ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်။ နီရိုနှင့်အတူစာလုံးပေါင်းနှင့်အာဏာ ups သို့ကာစ်နှင့်အပြစ် Wilbur အတူတက်ထားရန်သူတွေကိုအပိုခက်ခဲတဲ့အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းဗုံး!
ပေါက်ကွဲမှု! Stella အိမ်မှာထိုဘေးဥပဒ် Wilbur အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားသူမ၏ပြန်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ထား ယူ. , ပြန်ဆောက် customize နှင့်သူမ၏အိမ်ရာသစ် style နိုင်ရန်အတွက် Stella လိုအပ်တဲ့မှော်ကြယ်ပွင့်မြေမှုန့်ကိုရှာတှေ့ဖို့အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း pop!
သငျသညျအစဉျအမွဲလိုအပ်ပါလိမ့်မည်တစ်ခုတည်းသောပူဖောင်းသေနတ်သမား! တစ်ဦးတည်းကဒီမှော် Saga အပေါ်ကိုယူသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ pop တစ်ခုလုံးကိုသစ်ကိုက high-ရမှတ် setting များက၎င်းတို့၏ပူဖောင်းကွဲ။
ပူဖောင်းစုန်းမ3Saga features:
•ပွဲစဉ်3စွန့်စားမှုရိုက်ကူးဒီမှော်ဆန်တဲ့ပဟေဠိ၌သူတို့ကို pop မှသှ
• Spellbinding ဂိမ်းသည် Modes နှင့်ချစ်စရာဇာတ်ကောင်!
•ယင်းမြည်လွှတ်သည့်သရဲတစ္ဆေဖြစ်သည်နှင့်အ Wilbur ကနေ Fairy ဘုရင်မကြီးကိုကယ်တင်!
• Stella ၏အိမ်တော်ယူတည်ဆောက်ပေးနေခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ရဖို့သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
•အင်တာနက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူ devices များအကြားကစားပွဲစည်းညှိ
ကျွမ်းကျင်ဖို့စိန်ခေါ်ပူဖောင်းသေနတ်သမားကစားရန်တစ်ဦးကအခမဲ့ & လွယ်ကူသော•!
ပူဖောင်းစုန်းမ3Saga ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်သို့သော်အချို့ optional ကို In-ဂိမ်းပစ္စည်းများငွေပေးချေမှုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ Device ရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable အားဖြင့်ငွေပေးချေအင်္ဂါရပ်ကို turn off နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအကူအညီလိုလျှင် https://care.king.com/ သွားရောက်ကြည့်ရှု!
သတင်းရရှိရန်နှင့် update လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ:
ပူဖောင်းစုန်းမ3Saga ကစားပျော်စရာရှိသည်!
Bubble Witch3Saga အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bubble Witch3Saga အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Bubble Witch3Saga အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Bubble Witch3Saga အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 5.19k 8.24M
Bubble Witch3Saga ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bubble Witch3Saga အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.7.3
File Size: 86.14MB
Release date: 2019-06-26 18:01:36
လက်မှတ် SHA1: 9F:5C:F1:74:84:DA:E1:33:AD:88:FF:5A:B4:1C:D0:D8:BA:0D:DD:11
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Joakim Brunnestom
Bubble Witch3Saga APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ